RW KHEYRE: “Argagixisada weerarka ay ku soo qaaday dhismaha wadada muhiimka ah kuma guuleysan” – Maanta Online
RW KHEYRE: “Argagixisada weerarka ay ku soo qaaday dhismaha wadada muhiimka ah kuma guuleysan”
Ra’iisal Wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka qeyb galay daah furka shirka qaran ee dhallinyarada Soomaaliyeed, halkaasi oo uu ka jeediyay khudbad dhinacyo badan uu uga hadlay isla markaana dhallinyarada u jeediyay farriimo ku saabsan doorka ay ku leeyihiin nabadda iyo horumarka dalkooda.
Waxa uu sheegay Xasan Cali Kheyre in dhallinyarada ay ka qeyb qaataan halganka dalka looga xoreynayo kooxaha argagixisada ah oo uu sheegay inaysan u dagaalameynin diinta Islaamka, balse ujeedadoodu tahay baabi’inta dadka iyo dalka Soomaaliya.
“Argagixisada weerarka ay ku soo qaaday dhismaha wadada muhiimka ah ee u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye kuma guuleysan” ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre oo sheegay in weerarka Al-Shabaab caddeyn u yahay sida ay uga soo horjeedo dib u dhiska, isagoona hoosta ka hariiqay inaan lagu tilmaami karin Muslimiin ka damqanaya dadkooda isla markaana ay diidan yihiin Soomaalinimada.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa ugu baaqay dhallinyarada Soomaaliyeed inay u istaagaan nabadda iyo horumarka dalka oo ka soo kabanaya burburkii dagaalada sokeeye, isagoona uga mahad celiyay ciidamada milateriga iyo kale ee ammaanka ku shaqada leh sida ay had iyo goor ugu taagan yihiin difaacida dalka, dagaalka maleeshiyaadka Al-Shabaab looga xoreynayo goobaha ay dalka ka joogaan.
Shirweynaha qaran ee dhallinyarada Soomaaliya oo sanadkiiba mar la qabto ayaa sanado dhowr ah lagu qabanayay magaalada Muqdisho, kaasi oo dhallinyaradu uga hadlaan waxqabadkooda, isla markaana lagu wacyi gelinayo in dhallinyarada ay dalka ka tahriibaan iyo arrimo kale oo muhiim u ah doorka dhallinyarada ay dalkooda ku leeyihiin.
Muqdisho – Kenya
← WARBIXIN: Maxay qabatay Dowladda xilligeedu gabaabsiga yahay ee Madaxweyne Farmaajo, maxayse ka gaabisay?
Maxkamad ku taala dalka Airland oo xukun adag ku ridday aabe iyo hooyo guday gabadhooda →